Kedu nke bụ isi peculiarities na SEO na Amazon ka onye ọ bụla na-ere ya mara ya?
Nke a bụ ụfọdụ ndụmọdụ ndị dị mkpa na SEO maka Amazon ka ị bụrụ akụkụ na - enweghị ike ịgụta ọnụ nke ihe ndepụta ngwaahịa gị. Ịnwere ike iji ha mee ka ọkwa gị dị ugbu a n'elu ụwa kachasị ewu ewu n'Ịntanet. Ma tupu anyị amalite, ka anyị chee ya ihu - weere n'ozuzu ya, SEO maka Amazon na mgbe ụfọdụ, ọ dị nnọọ ka nke kachasị na-achọkarị njikarịcha Search Engine Optimization. N'otu oge ahụ, Otú ọ dị, enwere ụfọdụ ihe ndị dị na ebe ahụ, nke nwere ike ịbụ nnọọ ihe megidere azụmahịa azụmahịa na ụlọ ahịa weebụ. Nọgidenụ na-agụ iji ghọta ụdị ụzọ ọ bụla a na-esi enweta ngwaahịa ọ bụla na nchọnchọ ọ bụla na Amazon, na otu esi enweta ọtụtụ n'ime mgbanwe gị, yana isi ihe ndị dị mkpa, na ụzọ kacha mma ị ga-esi na-edebe ngwaahịa gị na ngwaahịa - na ihe ndị ọzọ ị ga-ama na ị ga-enweta na ibe nke SERPs.
Ihe ndị dị mkpa banyere SEO maka Amazon Uncovered
Tier One: Ịghọta Amazon SERPs
Search engine results pages on Amazon are based na ihe ndị na-esonụ:
Depụta Nlele (nsonaazụ ngwaahịa 15 bụ nke na-ekpuchi ngalaba niile) - web hostings chile.
Osisi Lee (24 a gosipụtara na ibe ọ bụla n'elu ụdị-kpọmkwem maọbụ arịrịọ ọchụchọ metụtara ngalaba).
Ubi nhọta (bụ ụtụ nke nyocha mbụ rịọrọ arịrịọ ngwaahịa, nke dị n'akụkụ aka ekpe nke sidebar).
Ndepụta Ndepụta (a hụrụ na ala nke SERPs, PPC kachasị mma ma nwee ọgaranya na mkpokọta isi ihe - dịka nke ahụ na Google AdWords dị n'etiti nsonaazụ ọchụchọ mbụ).
Nke abụọ: Ịghọta Amazon's Search Query
Na-esote, iji nweta foto zuru ezu nke SEO maka Amazon, ị ga-achọ ịdebanye aha njirimara ọchụchọ njirimara nke a n'elu. ịkụ nzọ na..E wezụga nke ahụ, nyere na ị maaralarị usoro usoro ịmepụta URL-URL kpọmkwem nke Google jiri, ihe ndị na-esonụ ga-abụrịrị ihe ịkọwapụtara onwe gị:
Field-Keywords are related to the ederede juputara na ndi nchoputa ahu ma nye n'aka Amazon n'ime akpo URL nke nwere ihe ndi ozo.
Node bụ nke abụọ nchịkọta ajụjụ dị mkpa, nke pụtara n'ezie otu ụdị ID nke Amazon (ma ọ bụghị ya, nọmba ọnụọgụgụ metụtara ngwaahịa ahụ).
Ubi-BrandTextBin bụ mpaghara ngwaahịa, nke nwere ike ịba uru maka ndị resellers, karịsịa ma a bịa n'ịtụle ngwaahịa dị iche iche n'otu ụdị.
Nke atọ: Arụmọrụ na Ihe Ndị Dabere na Dabara na Ihe
Ihe niile dị na Amazon nwere ike kewaa abụọ isi - (ihe nrịba ama na Amazon nwere ike iji ego nke ngwaahịa ọ bụla dị n'elu ebe ahụ), na Ihe Ndị Dabere na Dabara adaba (na-anọchite anya àgwà dị mkpa nke ngwaahịa ahụ a tụlere na arịrịọ onye ọrụ). 1. Ihe ndị dị mkpa nke arụmọrụ bụ ndị kachasị na ha nwere ike ịzụta ihe ọ bụla nwere ike ịzụta na ya (ọnụego a gbanwere na ọnụ ọgụgụ, otu nnọkọ na ịzụta igbe pasent, njikarịcha anya, okporo ụzọ okporo ụzọ, yana ọnụ ahịa ngwaahịa).
2. Ihe isi ihe dị mkpa na-ekpuchi isi akụkụ ọchụchọ ọchụchọ dị mkpa - ha dịkwa mfe maka njikarịcha (ndepụta ngwaahịa na nkọwa okwu mkpịsị ugodi nke dị na nkọwa ya n'onwe ya, yana ngwaahịa, nkọwa ya, nha ma ọ bụ akụkụ, ọnụọgụ, na ihe nkwụpụta - ngalaba ọ bụla bara ọgaranya na isiokwu ndị dị mkpa).